एटीएम प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाऔँ, सर्न सक्छ कोरोना ? – RemitKhabar
काठमाडौं – कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’ को कारण विश्व ब्रमाण्ड आक्रान्त बनिरहेको छ । नेपाल र नेपालीमा पनि यसको प्रभाव छ । दिनानुदिन संक्रमित संख्या बढ्नु र यसविरुद्धको भ्याक्सिनको परीक्षण एकपछि अर्को असफल हुँदै गएका कारण यसबाट बच्ने अचुक उपाय भनेको नै सावधानी अपनाउनु हो ।
त्यसैले हामीले गर्ने आनीबानी र व्यवहारमा सावधानी अपनायौँ भने हामी यस महामारीबाट बच्न सक्छौँ ।
यतिबेला जुनसुकै एटीएम बुथबाट पैसा निकाले पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था छ । यसअघि एउटा बैंकको कार्ड अर्को बैंकको बुथमा प्रयोग गर्दा शुल्क लाग्ने व्यवस्था भएतापनि कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’ संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निःशुल्क कारोबारको सुविधा दिएका छन् । त्यसमाथि नेपालमा अहिले लकडाउन भएका कारण पनि अति आवश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन सरकारले निर्देशन दिएको अवस्थामा तपाई बैंक गईरहन सम्भव हुँदैन । तसर्थ तपाईले नजिकैको एटिएम प्रयोग गर्नुहुन्छ । तर होसीयार अब एटिएम प्रयोग गर्दा निकै सावधानी अपनाउनुपर्छ ।
भारतको यो घटनाले पनि एटीएम प्रयोगमा सावधानी अपनाउनुपर्ने प्रमाणित गर्छ ।
भारतको गुजरातमा एटीएम प्रयोग गरेका २८ जना समस्यामा परेका थिए । गुजरातको बडोदरामा एटीएम गएर आएका ३ भारतीय सैनिकमा कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि उनीहरुसँग सम्पर्कमा आएका २८ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको थियो । प्रारम्भिक जाँच अनुसार ती ३ जवानले एकै एटीएम बुथ प्रयोग गरेको बताइएको छ। उनीहरुले एकैदिन सो बुथबाट पैसा निकालेको उनीहरुको भनाई उदृद गर्दै अन्तर्राष्टिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । सोही एटीएमका कारण नै उनीहरु कोरोना संक्रमित भएको आशंका गरिएको छ।
यसअर्थ विश्वभरका देशहरुले कोरोना भाइरस कोभिड–१९ विरुद्ध ‘युद्ध’ गरिरहेको वर्तमान अवस्थामा हामीले प्रयोग गरेको सार्वजनिक सवारीदेखी एटिएम, पसल, बेच्न राखिएका लत्ताकपडा, ट्वाईलेट, धारा, भर्याङ, रेलिङ, एलिभेटर प्रयोगमा सावधान हुन जरुरी छ ।
यसअघि मानव समाजले विफर, प्लेग, हैजा, पोलियो, क्षयरोग आदिको सामान गर्दै आएका थिए । ब्ल्याक डेथ कालो मृत्यु नामबाट परिचित प्लेग महामारी चौंधौ शताब्दीमा मध्य एशियाबाट युरोप, उत्तर अमेरिका तथा अफ्रिकाको घनावस्तीमा फैलिएर करिब ५ करोड मानिसको ज्यान लिएको थियो । प्लेग रोग व्यासिलस एस्निया नामक व्याक्टेरेयाबाट संक्रमित मुसाको उपियाँबाट मानिसमा सारेको थियो । मानिसबाट मानिसमा तीब्र गतिमा फैलिएको थियो ।
यो मानव इतिहासमा देखा परेको सबै भन्दा विनासकारी महामारी थियो । चिकित्सा इतिहासविद्हरुको अनुसार ईसापुर्व ४१२, ईस १५८०, १७२९, १८३०, १९१८ मा फ्लु वा इन्फ्लुएन्जा महामारी भएको थियो । सय वर्षअघि सन् १९१८ मा अहिले देखा परेको जस्तै स्पेनिश फ्लुको महामारीबाट विश्वका आधा जनसंख्या संक्रमित भएका थिए । करीव ४० वर्षपछि सन् १९५७र५८ मा एशियन फ्लुको महामारी फैलियो । त्यसपछि सन् २००३ मा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नै सार्स ९सिविएर एक्युट रेश्पीरेटोरी सिन्ड्रम० चीनबाटै २६ देशमा फैलिएको थियो । सार्सबाट ८ हजार ९६ जना संक्रमित भएका र ७ सय ७४ जनाको मृत्यु भयो । दश वर्षअघि सन् २००९–२०१० मा स्वाइन फ्लु मेक्सीकोबाट फैलियो । यो फ्लु नेपालसम्म आयो । यो महामारीले विश्वभर २ देखी ५ लाख मानिसको ज्यान लिएको थियो ।
यसैबीच एनआईसी एशिया बैंकले कोरोना संक्रमण न्यूनिकरण सतर्कताका विधिहरू अपनाई आफ्ना सेवाहरूलाई निरन्तरता दिएको छ ।
हुन त विश्वले ईन्टरनेटको माध्यमबाट एक क्लिकमा संसार तपाईको हातमा सम्भव बनाएको छ । सकेसम्म ई बैंकिङ प्रयोग गर्नुहोस् । यदि एटिएम जानैपर्ने अवस्था आएमा यी उपाय अपनाउनुहोस् ।
यदि तपाईंलाई रुघाखोकी छ भने बाहिर नजानुहोस्। घरमा नै आराम गर्नुहोस् । एटीएममा काम गर्दा हाच्छ्युँ आयो भने कुईनाले मुख छोपी मास्क लगाउनुहोस् । खडा हुँदा अचानक हाछ्यू आयो भने आफ्नो मुखलाई पाखुरा वा टिस्यूले छोप्नुहोस्।
प्रयोग गरिएको टिस्यू र मास्क एटीएमको डस्टबिनमा नहाल्नुहोस् । यसले अरूलाई संक्रमण फैलाउन सक्छ ।
घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क अनिवार्य लगाउने, पुरै अनुहार छोप्ने, हातमा पन्जा लगाउने र आँखाको सुरक्षा चस्मा प्रयोग गर्ने
घरबाट बाहिर निस्कँदा अनिवार्य एउटा सेनिटाइजर आफूसँगै राख्नुहोस् ।
कुनै स्थान फलाम, रेलिङ, सवारी साधनको डण्डी मा छुनुभएको छ भने, तुरुन्तै सेनिटाइजरले हात सफा गर्नुहोस् ।
एटिएममा अर्को मानिस प्रयोग गर्दै छ भने दुरी कायम गरी पालो कुर्नुहोस् ।
व्यक्ति निस्केर गएपछि कुहिनाले ढोकाको ह्याण्डिल खोल्नुहोस् वा हातले खोलेर भित्र जानुहोस् र सेनिटाईजर प्रयोग गर्नुहोस् । वा एकैपटक एटिएमको बटन थिचेर सेनिटाईजर प्रयोग गर्नुहोस् । सकेसम्म पातलो ग्लोब्स् प्रयोग गर्नुहोस् ।
एटिएमको नम्बर बोर्ड थिचेर पैसा निकालेपछि सुरक्षित राखि कुईनाले थकेलेर ढोका खोल्नुहोस् र सेनिटाईजर प्रयोग गर्नुहोस्
एटिएम प्रयोग गर्न जाँदा परिचित मानिस भेटिए नमस्कार गर्नुहोस् । वा टाढाबाट हेल्लो भन्नुहोस्। हात नमिलाउनुहोस् ।
सार्वजनिक यातायातमा पनि विचार पुर्याऔँ ?
सार्वजनिक यातायातको प्रयोगमा पनि होसीयारी अपनाउनुपर्छ । कोरोना भाइरस ‘कोभिड १९’ बाट बच्न तपाईले सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने भएको छ । कारण ”कोरोना भाइरस फलाम वा फलामजन्य वस्तुमा लामो समय जीवित रहन्छ ।”
गत डिसेम्बर अन्तिम साता चीनको वुहानबाट फैलिएको यो भाइरसका कारण लाखौँ मानिसले जयान ग’माएका छन् । विश्वमा नै एउटा तरंग ल्याएको छ । ‘कोविड १९’ के कारणले यति धेरै फैलिरहेको छ भन्ने बारेमा अहिले सम्म पत्ता लाग्न सकेको छैन । वैज्ञानिकहरु पनि यस बारेमा अनुसन्धान गरिरहेका छन् । तर केहि समय अघि भएको एक शोधमा एयर कन्डिसन बस र मेट्रो ट्रेन वा अन्य सवारी साधनमा कोरोनाका पोजिटिभ व्यक्तिको साथमा यात्रा गर्नु तपाईलाई समस्या बन्न सक्ने भएकोले निकै होसीयारी र साबधानी अपनाउनुपर्ने भएको छ ।
‘चाइनिज सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ सीडिसी का अनुसार केहि शोधकर्ताहरुले मिलेर एक रिपोर्ट प्रकाशित गरेका छन् ।
उक्त रिपोर्टका अनुसार वार्ता गरिने ठाउँबाट पनि हावाको माध्यमबाट कोरोना सर्न सक्ने र कोरोना पोजेटिभ मानिस भएको ठाउँमा र उ बसेको ठाउँमा पनि ३० मिनेट सम्म जिउँदो रहन सक्ने बताइएको छ ।साथै कोरोना संक्रमित व्यक्ति भन्दा टाढा ४।५ मिटरसम्म फैलिन पनि सक्षम रहन्छ । उक्त सोधबाट यस कुराको पुष्टि भएसँगै सार्वजनिक सवारीमा यात्रा गर्नको लागि चुनौति थपिएको हो ।
चीनको हुनान प्रान्तमा भएको यो शोधमा १५ जना मानिसहरुलाई सामेल गरिएको थियो । ति सबै जना एक बसमा यात्रा गरिरहेका थिए ।
बसमा बसेका बिना माक्स बसेका एक जना संक्रमित व्यक्तिको माध्यमबाट १५ मध्ये २ जनालाई कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको थियो ।